Ukufundwa kwe-psychic okuku-inthanethi | Xoxa nomlingo osebukhoma manje. Thola indlela yakho yokuthanda nenjabulo ngePsychicBonus.com top psychics online, tarot kanye nezinkanyezi abafundi. Qala iseshini yengxoxo yamahhala yezingqondo. Ukufundwa kwe-Psychic lapha kuzokunikeza izimpendulo ngendlela esebenzayo kakhulu.
Ukufundwa kwengqondo ku-intanethi
Ngiphenyisisa futhi ngihlola izinkampani zokufundwa kwengqondo ukusiza abantu bathole ama-psychics abanobuhlakani kakhulu. Nginikeze izibuyekezo ngalokho engicabanga ukuthi yiyona Izinkampani eziphezulu ze-10 zokufundwa nge-psychic kwi-intanethi. Ngizoshicilela kuphela ukubuyekezwa ezinkampanini engizisebenzise zona futhi ngitholile ukuhlangabezana namazinga aphakeme engangiwafunayo. Lokhu kugcina izinto ziqotho. Ngikucela ukuba usebenzise ngokunenzuzo ucwaningo lwami olubanzi, futhi ngiyaqiniseka ukuthi uzothola inkampani evumelana nezidingo zakho. Jabulela!
I-Oranum iyinethiwekhi entsha yezengqondo e-United States, kepha sebeneminyaka eminingi bebhizinisi ePoland lapho yasungulwa khona. Manje sebephume eHungary. Futhi banezinto ezithile ezihlukile ezinganikezwanga ngamanye amanethiwekhi wemilingo. Banikeza ukufundwa kwengxoxo, ukufundwa kwe-imeyili kanye nokufundwa kwe-web cam. Ukufundwa kwe-webcam kufana nokubuka ividiyo ye-YouTube, futhi awudingi ikhamera yakho yewebhu noma imakrofoni ukuxhumana ne-psychic. Konke ukuxhumana kuthayhelwa ebhokisini lengxoxo okunamathiselwe kuvidiyo ye-webcam. I-psychic yakho izophendula bukhoma esikrinini. Uma une-webcam nemakrofoni ungakhuluma ngqo ne-psychic ngaleyo ndlela.
Ukubuyekezwa kweWebhusayithi ye-Oranum >>
I-AskNow yayisondelene kakhulu nomthombo we-Psychic. I-Asknow ibilokhu ibhizinisi kusukela ku-1995, futhi ingenye yamanethiwekhi ahlonishwa kakhulu e-psychic ebhizinisini. I-AskNow yiyena yamanethiwekhi wokuqala we-psychic ukunikeza ukufundwa ku-intanethi, futhi isebenzisa abanye abafundi abahlakaniphile abanengqondo ezweni. Banikeza bobabili ucingo futhi baxoxisane nokufunda, futhi banama-psychics angenza nokufundwa ngeSpanishi futhi. Lokhu akuyona enye into enikezwa inethiwekhi ye-psychic. Amanani abo ayengqondo ngokugcwele, futhi iwebhusayithi yabo yayilula ukuyisebenzisa.
Ukubuyekezwa Kwesiza Se-AskNow >>
I-Life Reader iyinsizakalo yezengqondo eyaziwayo e-Australia, New Zealand nase-UK. Muva nje sebeqalile ukuhlinzeka ngokufundwa kwe-Psychic e-United States! Ukukhetha kwabo ama-Psychics kuhle futhi ikhwalithi yabo ibonakala ingaphezulu kweph. Esikhundleni sokukhethwa kwama-Psychics amakhulu kakhulu bagxila kubafundi bePsychic abanikeza ukufundwa okuqondile okuthembekile okusitshela ukuthi bazama kanzima ukuthola ibhizinisi lakho esikhundleni sokuzama ukwenza ibhande elisheshayo. Ngenxa yalokhu bathuthukise isisekelo samakhasimende athembeke kakhulu selokhu baqala e2008. Intengo yabo yesingeniso ye- $ 0.19 / min nje ayiqhathaniswa nanoma iyiphi i-Psychic network esiyibukezile, futhi yisivumelwano esimangazayo. Noma iwebhusayithi yabo bekulula ukuyisebenzisa futhi inikeze i-FAQ enhle kumakhasimende sidumele ukuthi abanaso isiqinisekiso sokubuyiselwa imali noma inombolo yocingo yamakhasimende ongayishayela uma ungonelisekile.
Ukubuyekezwa Kwesiza Sewebhu se-LifeReader >>
Umthombo we-Psychic walinganiselwe inethiwekhi yethu ephezulu yengqondo ngenxa yezingqondo zabo ezibucayi, insizakalo yamakhasimende ehlukile, nokukhethwa okubanzi kwemilingo ngezipho ezahlukene. Umthombo we-Psychic wasungulwa ku-1989, cishe iminyaka engu-5 ngaphambi kwe-intanethi. Izinkulungwane zamakhasimende zikhetha izimo zengqondo kuMthombo we-Psychic nsuku zonke. Baziqhenya ngokwaneliseka kwamakhasimende namanani angabizi.
Ukubuyekezwa kweWebhu ye-PsychicSource >>
UKeen ubengomunye wamanethiwekhi okuqala kwezengqondo online, futhi yenethiwekhi enkulu kunazo zonke yezengqondo. Banama-psychics atholakalayo noma kuphi. Ngoba cishe ayikho inqubo yokuhlola yabeluleki abaheha inani elikhulu kakhulu lama-psychics. Izazi zezengqondo ezinesibindi zinokufunda ngocingo ukufundwa noma ukufundwa kwengxoxo, inqobo nje uma umeluleki omkhethayo ekunika. Sisithandile impela isici sokubuyela emuva kwezingcingo uKeen asisebenzisayo. Uma i-psychic obefuna ukukhuluma nayo ayitholakali i-Keen.com izokushayela ngokuzenzakalelayo ngokushesha nje lapho itholakala. Ukukhetha okukhulu kwama-psychics, kanye nobuchwepheshe obuphambili kwenza iKeen.com ibe yinhle, kepha ukuntuleka kwanoma yiluphi uhlobo lokuhlola noma inqubo yokugunyazwa kwama-psychics kusishiya sikhathazekile.
Ukubuyekezwa KweWebhusayithi Okubukekayo >>
I-psychics yase-Hollywood iyinethiwekhi entsha entsha evuliwe ngonyaka odlule. Inhloso yabo ukuthi babe nezinkinga ezidumile kunazo zonke kuleli zwe kunethiwekhi yabo. Ngicabanga ukuthi bafeza lowo mgomo, kodwa akuzona zonke izicabangela ezinkundleni zabo ezidumile. Ukukhethwa kwabo kwengqondo kuncane, kodwa konke kuhle kakhulu. Banikeza bobabili ucingo futhi baxoxisane nokufunda, futhi amazinga abo ayenengqondo ngokucabangela abantu abanekhono abasebenza lapho.
Ukubuyekezwa kweHollywoodPsychics >>
I-Psychic Access iyinethiwekhi emincane yezengqondo, kepha azikhiphi izici. I-Psychic Access bekungukuphela kwenethiwekhi yezengqondo esibuyekezile enikeza ukufundwa kwe-cam cam, okuhlukile ukusho okuncane. Inethiwekhi ingeyese-psychic eyaziwa ngokuthi i-DougC. U-DougC uhlonza uqobo yonke i-psychic ngaphambi kokuba bavunyelwe ukusebenza naye. Eduze komthombo we-Psychic banenqubo yokuhlola enhle kakhulu laphaya.
Ukubuyekezwa Kwesiza Sengqondo sePsychic >>
UKasamba uzihlukanisa ngokuhamba phambili ekufundeni okususelwa engxoxweni. Muva nje, khetha ama-Psychics aseqalile ukunikela ngokufundwa ngocingo, noma kunjalo, hhayi wonke ama-Psychics kunethiwekhi anikeza ukufundwa kwefoni. UKasamba uzihlukanisa ngokukhethekile ekufundeni okususelwa engxoxweni, futhi bahamba phambili kukho. UKasamba wayekade enguMuntu Oukhoma. UKasamba wasungulwa e1995 njengendawo yabantu yokuthola izeluleko kochwepheshe ngezihloko eziningi ezahlukahlukene kubandakanya umthetho, imali, ngisho nezazi zezengqondo. Muva nje Umuntu oPhilayo ushiye uphawu lweKasamba manje sekuyinethiwekhi esemthethweni yezengqondo! Sithole ukuthi ukufundwa okususelwa engxoxweni bekukuhle ngoba bagcina ilogo yazo zonke izingxoxo zakho, ngakho-ke ungahlala ubuyela emuva futhi ufunde lokho abakusho nganoma yisiphi isikhathi okufunayo.
Ukubuyekezwa Kwesiza SeKasamba >>
Indlela Yokutshela Uma I-Psychic Yakho Ithembekile Noma Inkohliso
Abantu abaningi baphendukela ezingqondweni ukuze bathole izimpendulo zemibuzo ebalulekile noma iseluleko ngesikhathi esibucayi empilweni. Isiqondiso esikhulu singasetshenziswa emilonyeni yangempela, kodwa kungaba nzima ukucacisa ukuthi ngabe umfundi uvumelekile yini noma ukhohlise. Into engcono kakhulu ongayenza esimweni esinjengalezi uzifundise ukuze kube lula ukubona izimpawu zokuxwayisa zomculi womculi.
Ukubuza Imibuzo Yakho Ye-Psychic engaqondakali
Kubalulekile ukukhumbula ukuthi i-psychic ehloniphekile ithola ulwazi lwazo kumthombo wangempela, ngakho-ke ulwazi luzobe lucacile. Umfundi okhohlisayo usanda kuwubuza, futhi bazobuza imibuzo engacacile ngomzamo wokukuholela ekuboniseni ulwazi lwangempela.
Ngokwesibonelo, i-psychic engathembeki ingase ithi into enjengaleyo, "Ubani indoda enegama R?" Kungenzeka ukuthi, iningi labantu linamadoda emndenini wabo ogama eliqala nge-R.
I-psychic esemthethweni ingathi, "Nginendoda lapha ngegama likaRobert owadlula ukuhlaselwa yinhliziyo." Ulwazi luzoba lwangempela futhi oluqondile futhi isikhathi esiningi, uzokwazi ukuwaziswa ngokushesha kakhulu. Izibonelo:
Psychic Inkohliso: "Ubani owayeyindoda eyabulala kakhulu, noma ngendlela eyingozi?"
I-Psychic yangempela: "Nginomfana osemusha owadlula engozini yemoto."
Psychic Inkohliso: "Ingabe kukhona isithakazelo sothando empilweni yakho ongayizwa sengathi uthola i-100% kusuka?"
I-Psychic yangempela: "Umuntu owake waba naye isikhathi eside akubuyanga uthando lwakho ngendlela oyifunayo noma efanele. Okubambe lo muntu emuva ukwesaba ukuzibophezela futhi kudingeka uthathe isinqumo lapho ukwanele ngokwanele. "
Impendulo yakho Engokomzwelo
Kunezikhathi lapho abantu bebethemba ngempela umlayezo noma isiqondiso. Bangathembela kakhulu kangangokuthi babe yizinto ezilula zama-psychic abafundi abangathembeki abathi baqinisile. Kodwa-ke, uma ukhuluma nama-psychics abakhulu, bavame ukuveza ulwazi oluthola impendulo esheshayo futhi eqinile kumakhasimende abo. Lokhu kungenxa yokuthi ulwazi lushaya ekhaya futhi umuntu ngokuzenzakalelayo uyazi ukuthi ulwazi ngabo.
Kungase kungenzeki ngaso sonke isikhathi lapho ukhuluma nomuntu onengqondo, kodwa kubalulekile ukuthi ufunde ukuthembela imizwelo yakho kanye nokuqonda uma kuziwa kolwazi olutholakala ekufundeni. Uma uzizwa unqanyuliwe ngokuzenzekelayo kolwazi, njengokungathi akuyona eyakho, khona-ke ungase ufune ukukhokha eduze futhi ubheke ezinye izimpawu zokuxwayisa.
Uqalekisa noma izilo
Uma abafundi bekusho ukuthi sekube nesiqalekiso, noma isipelingi siyadingeka ukuze uqede amandla angalungile okukuzungezile, cishe kungenzeka amanga. Laba bakhohlisi bazosabeka amaklayenti abo ngokuqala ukuwatshela ukuthi isiqalekiso yisisusa senhliziyo ebuhlungu kanye nanoma yiziphi ezinye izinkinga abazitholile kamuva. Bese bayakunikela ukususa isiqalekiso ngokwenza imikhosi ethile yasendulo, futhi bayakhokhisa imali yokwenza kanjalo.
Lokhu kuyisibonakaliso esiqinisekisayo sokuhlaselwa kwengqondo okuzama ukwethusa amaklayenti ekukhokheni ukususwa kokuqalekisa. Ngokudabukisayo, abantu abaningi bayawa ngenxa yokuthi isiqalekiso sibonakala siyindlela enhle yokuchaza izinkinga zokuphila abaye babhekana nazo nokuthi abakholelwa ukuthi kufanelekile. Ngeshwa, akulula njengokukhokha ama-dollar ambalwa ukukhipha isiqalekiso. Ungakholelwa ukuthi "i-psychic" ekutshela lokhu.
Enye into enkulu ezokusiza ukunquma ukuthi ngabe i-psychic ihlonishwa yini I-Online Psychic Chat ihlola inthanethi ukubuyekezwa kanye nobufakazi. Amakhasimende adlule abhekene nesipiliyoni esihle noma esibi nge-psychic ethize kungenzeka akhulume ngawo. Ukufunda ukubuyekezwa kanye nobufakazi kungakusiza ukunquma ukuthi ngabe i-psychic yayiwusizo kwamanye amakhasimende nokuthi ngabe bakholelwa yini ukuthi umuntu uvumelekile noma cha.
Lokhu kungaba yizinga elihle uma kuziwa ekugwebeni ukuthi ngabe ingabe ingqondo ye-psychic ingokoqobo. Ngisho nezingqondo eziphezulu zingase zingahlali zamukele noma zisebenze namaklayenti abambisanayo, ngakho-ke kungenzeka ukuthi abafundi abakhulu babe nokubuyekezwa okungalungile lapha nalapha, kodwa labo abanokubukwa okubi kakhulu kufanele babhekwe eduze.
Ngokufunda ukubona lezi zibonakaliso ezixwayisayo, ungagcina uchitha imali yakho eyinkimbinkimbi ekusakazeni kwengqondo ku-intanethi. Qinisekisa ukuthi kunezimo zangempela, ezinakekelayo ezikhona ezifuna ngempela ukudlulisa noma yikuphi imilayezo nesiqondiso abangakuthola kuyo yonke indawo, ngakolunye uhlangothi noma eminye imithombo.
Isinyathelo Esilandelayo Sini?
Uma ufuna ukufundwa kwengqondo ngokusemthethweni, sebenzisa izinkampani ezihlonishwayo kuphela ezifana namanethiwekhi amathathu we-psychic esibalwe ngenhla (Asknow, Umthombo we-Psychic, Kasamba kanye nabanye.). Zonke lezi zinkampani zinezinketho ezinkulu zokukhethwa kwabacebisi ukuba zikhethe, futhi umfundi ngamunye uhlolwe ngokucubungula nokuhlola okuqinile ukuqinisekisa ukuthi bangempela bangempela futhi banekhono langempela.
I-Psychic Link Exchange
Izindawo Zengqondo Zamakhuphoni: